Posted by Tranquillus | Feb 10, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Xidhiidhiyayaasha macquulka ah ee qoraalka xirfadeed ugu wanaagsan
Waxay u badan tahay inaad qorto daraasiin iimaylo ah maalintii. Ilaa hadda, adiga, qoraalku waxa uu u badnaa higaada, naxwaha, isku xidhka. Xitaa haddii aan baranno maalin kasta. Tani maaha halka aad rabto inaad diirada saarto dadaalkaaga hadda. Markaad diyaariso a email, warbixin ama guud ahaan nooc kasta oo qoraal ah. Waxaad leedahay aragti ah in ay wax khaldan yihiin. Wax yar ayaa ka maqan oo aan ka helno dukumentiyada rasmiga ah, wargeysyada, buugaagta. Erayada, sida ay u kala horreeyaan, adeegsiga odhaahda oo ah astaanta lagu garto dadka aqoonta u leh qoraalka. Ku billow dib-u-habaynta qoraalkaaga adigoo isticmaalaya xidhiidhiyeyaasha macquulka ah ee la yaqaan ee ka sii waaraya.
Xidhiidhiyeyaasha macquul ah maxaa loo qabtaa?
Tani waa sababta sababta, si kastaba ha noqotee, si ka duwan, qaabka ……. Xidhiidhiyayaasha macquul waa ereyada ay tahay in loo isticmaalo qaabeynta qoraalka. Ugu horreyntii in la xoojiyo xiriirka macquulka ah ee u dhexeeya qaybaha kala duwan ee qoraalkaaga, weedha. Sababta keenta waxaas oo kale iyo cawaaqib-xumada dhacdadaas Maxaa suurtogal ka dhigaya in lagu guuleysto ujeeddadaas. Qofkasta oo ku aqriya wuxuu fahmi doonaa hadalkaaga madmadow la'aan.
Heerka luuqada in la isticmaalo
Xitaa sidaas oo ay tahay, caqliga iyo higaadda qoraalkaagu waa kuwo aan fiicnayn. Waa suurtagal in ku soo noqnoqoshada nidaamsan ee ereyo isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, waxay siisaa muuqaal qallafsan. Sidaa darteed waa inaad dib u akhrido qoraalkaaga waxaa lagu beddelay tusaale ahaan laakiin waxaa lagu beddelay: si kastaba ha noqotee, dhinaca kale, iwm. Isticmaalka galleyda dabcan khalad kuma jiro laftiisa. In kasta oo wax waliba jiraan, isticmaalka isku xirayaasha ka tirsan diiwaanka aad loo taageero. Isla markiiba ku dar qoraal aad u turxaan badan, xirfad dheeri ah qoraalkaaga. Noocyada kala duwan ee ereyadaada oo ay weheliyaan ereyo toosan oo daadanaya iyada oo aan lagu celcelin yar. Waxaan hubaal ka dhigi doonaa gudbinta wanaagsan ee macluumaadka aad rabto inaad faafiso.
Liistada isku xirayaasha caqliga ku habboon si joogto ah ugu habboon qoraalkaaga
Halkan waxaa ku yaal liistada iskuxirayaasha si loogu isticmaalo emaylladaada, warbixinnada iyo qoraallada kale. Adiga oo si taxaddar leh u maareeya waxaad fududeyn doontaa akhriska iyo fahamka wanaagsan ee qoraaladaada. Waa iska cadahay in fikrad weyn, oo aan cidina fahmi doonin, ay dhaqso ku iloobi doonaan madaxdaada.
Arrintan la xiriira
Si ka duwan sidii
Aan ka ahayn
Ka soo qaad in
Si dhow u fiiri
Ku filan inaad sheegto
Si kale haddii loo dhigo
Tani waa sababta.
Taasi waa sababta
Taasi waa in la yiraahdo
Tan waxaa ka mid ah
Si ka duwan
Halka laga keenay
Marka laga eego aragtidan
Si wax ku ool ah
Ka soo horjeedka
Adoo raacaya mala-awaalkan
Marka la eego taas
READ Maxaa sharxaya cabsida qoraalka?
Si kastaba ha noqotee
Waxaa intaa dheer
Adoo isbarbar dhigaya
Guud ahaan guud ahaan
Gaar ahaan gaar ahaan
Si ka sii saxsan
First of dhan
Dhamaan isku mid
Hagaaji qaabka qoraalkaaga: isku xirayaasha macquul ah July 25th, 2021Tranquillus
horeCaddaynta waqtiga dheeriga ah: shaqaaluhu maahan inuu muujiyo wax jabin ah
socdaNoqo Maareeyaha Beesha oo dhiirigelin cusub sii mashaariicdaada